अभिभावकको ढाड सेकाउने लाइसेन्स: विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ - लोकसंवाद
गत भदौ महिनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै बोर्डिङ स्कुलहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने अनुमति दियो । तर यो अनुमति दिनु अगावै धेरै निजी विद्यालयले अभिभावकसँग अनलाइन शिक्षाका नाममा धेरै रकम असुली सकेका थिए । अनलाइन पढाउँदा पनि अभिभावकसँग यती धेरै शुल्क किन ? भनी कसैले सोध्यो भने विद्यालयका मालिक वा प्रिन्सिपहरुसँग सोद्यो भने सहजै भनिने गरिएको छ ‘घर भाडा तिर्न र शिक्षकलाई तलब दिन’ ।
लकडाउनको मारमा रहेका बिचरा अभिभावक सकी नसकी आफ्नो बच्चाको फी जुटाउन लागे, लाग्नुको विकल्प पनि थिएन । कत्ति निजी विद्यालयले त अभिभावकले स्कुलको फी नतिर्दासम्म अनलाइन कक्षामा 'इन्ट्र' गर्न नदिएका समाचारहरू दैनिक रुपमा आइरहेका छन् । निजी विद्यालयले यस्तो अमानवीय कार्य गर्दा समेत शिक्षा मन्त्रालय एक शब्द पनि बाल्न आवश्यकता ठान्दैन ।
भिड–१९ का कारण ७० लाख विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भइरहेको छ । सरकारले असार १ गतेदेखि बैकल्पिक शिक्षा लागू गरेको थियो । तर विद्युत् कति ठाउँमा पुगेको छ, विद्यार्थी, इन्टरनेटको पहुँच सम्म छ ? इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवा कति भरपर्दो छ ? मोबाइल, कम्प्युटर, ट्याप वा ल्यापटपको उपलब्धता तथा जुम वा माइक्रोसफ्ट सपोर्ट गर्ने खालका छन् कि छैनन् भन्ने सामान्य ख्याल गरिएको छैन ।
विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ भनेर निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । यस बुँदालाई आधार मान्दा सामुदायिक विद्यालयले पनि शुल्क लिन सक्ने देखिन्छ र स्थानीय तह अनुसार फरक फरक शुल्क निर्धारण पनि हुन सक्ने देखिन्छ । यदि यस्तो अवस्था भइदियो भने गरिब र निमुखाका छोराछोरी स्कुल जानबाट वञ्चित रहन सक्ने समेत अवस्थालाई सामान्य ख्याल गरेको पाइँदैन । फेरी मन्त्रालयले भदौ १८ मा जारी गरेको निर्देशिका संविधानसँग पनि बाझिने खालको रहेको छ । संविधानको धारा ३१ को धारा २ मा उल्लेख गरिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । आधारभूत देखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नै निःशुल्क भनेर उल्लेख हुँदा हुँदै २०७७ भदौ १८ मा जारी गरिएको विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकाले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने अनुमति दिँदा बाझिएको देखिएको हो । अनलाइन पढाई गरेबापत विद्यार्थीसँग ढाडै सेक्ने गरी मोटो रकम असुल्नु असंवैधानिक कार्यलाई प्रशय दिइएको छ ।
बानेश्वरकी कृपा दाहालकी छोरी पनि निजी स्कुलमा आधारभूत तहमा नै पढ्छिन्, तर उनले आफ्नो छोरीलाई अनलाइन पढाए बापत ५० हजार भन्दा बढी रकम स्कुलमा बुझाइसकेकी छन् । सरकारले निर्देशिका जारी गर्नु अगाडि नै आधारभूत तहमा पढ्ने छोरीका लागि उनले ३० हजार रुपैंया स्कुलमा बुझाइसकेकी थिइन् । पछिल्लो समयमा २५ हजार रुपैंया बुझाएको उनले बताइन् ।
शुल्क कतिसम्म लिन पाउने वा कस्ता कस्ता विद्यालयले लिने भनेर मापदण्ड नछुटयाइ दिँदा स्कुलहरूको मनपरी नै छ । शुल्कमा एकरूपता छैन । कुनै कुनै स्कुलले अन्य खर्च समेत विद्यार्थीलाई पढाए बापत टयूसन फि मा जोडेका छन् । इन्टरनेट चलाउँदा लागेको खर्च, विद्यार्थीलाई पढाउन शिक्षकले गरेको मिहेनत र विद्युत खर्च मात्र जोडेर विद्यार्थीको शुल्क लिइदिएको भए पनि अभिभावकले अलिकति भए पनि राहत पाउने थिए ।
कोभिड–१९ का कारण ७० लाख विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भइरहेको छ । सरकारले असार १ गतेदेखि बैकल्पिक शिक्षा लागू गरेको थियो । तर विद्युत् कति ठाउँमा पुगेको छ, विद्यार्थी, इन्टरनेटको पहुँच सम्म छ ? इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवा कति भरपर्दो छ ? मोबाइल, कम्प्युटर, ट्याप वा ल्यापटपको उपलब्धता तथा जुम वा माइक्रोसफ्ट सपोर्ट गर्ने खालका छन् कि छैनन् भन्ने सामान्य ख्याल गरिएको छैन ।
रेडियो टेलिभिजनसम्म विद्यार्थीको पहुँच छ कि छैन जस्ता सामान्य कुराको पनि अध्ययन नगरी सरकारले बैकल्पिक शिक्षालाई अघि सारिहरेको छ । यो तर विद्यार्थीहरूले वैकल्पिक शिक्षाको फाइदा लिन नै सकेनन् । सरकारले दूर दराजका विद्यार्थीका लागि रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाइ त सुरु गरयो तर विद्यार्थीसँग रेडियो सुनेर पढ्नका लागि रेडियो नै भएन । टेलिभिजन हेरेर पढ्नका लागि टेलिभिजन नै भएन । यसले गर्दा बैकल्पिक शिक्षा पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार कसले कति शुल्क लिन पाउने अनि कसले नपाउने भनी प्रस्ट खुलाइएको छैन । जस्ले गर्दा सामुदायिक विद्यालयले समेत विभिन्न बहानामा शुल्क नलेलान् भन्न सकिँदैन । फेरि ७५३ वटा स्थानीय निकायले आ-आफनै तरिकाले शुल्क लिँदा ७०० वटा फरकपना आउने देखिन्छ । यदि निजी विद्यालयको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । हैन भने संविधानसँगै बाझिने निर्देशिका जारी गरेर निजी विद्यालयको रवैयालाई नियन्त्रण सम्भव नै देखदिैन । कतै निर्देशिका अभिभावकको ढाड सेकाउने लाइसेन्स नबनोस् ।